Maxxansa yookiin dubbifamuun dura qabiyyee to'achuu - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 14:57 21 Adooleessa 202114:57 21 Adooleessa 2021
Abbaan Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa eeyyama hojii 'Addis Standard' yeroodhaaf dhorkee ture amma kaasuun hojiitti akka deebi'uuf murteessuu isaa hime.
...tti maxxanfame 11:01 16 Adooleessa 202111:01 16 Adooleessa 2021
Dhaabbileen idil-addunyaa afur dhorkamuu Addis Standard morman
Hayyamni maxxansaa marsariitii Addis Standard Finfinnee kan ta'e Miidiyaa Jaakeen yeroof jedhamuun dhorkuu hordofee dhaabbileen adda addaa mormiisaanii dhageessisan.
...tti maxxanfame 4:51 18 Guraandhala 20214:51 18 Guraandhala 2021
Labsiin sabaa himaalee haaraa ragga'e maal qabateera?
Labsii sabaa himaalee haaraatiin gaaffileen mana maree miidiyaa kamitu deebii argatan?
...tti maxxanfame 5:40 14 Amajjii 20215:40 14 Amajjii 2021
Biyyoota Afriikaa kam fa'ituu tajaajila intarneetii cufaa jira?
Yugaandaan guyyaa filannootiin dura lammiileen miidiyaa hawaasaa akka hinfayyadamne cufte, haa ta'u malee biyyi tunis ardii kana keessa gochaa akkanaa raawwachuun addaa miti.
...tti maxxanfame 5:12 24 Muddee 20205:12 24 Muddee 2020
Kufaatii H/sillaasee waggaa 1ffaa irra maxxansa jalqabaa 'Bariisaatu' bahe
Seenaa gaazexaa Oromoo keessatti Bariisaan bakka ol-aanaa akka qabu gaazexeessitoonni buleeyyiin ni dubbatu. Bariisaan 'Angafa Gaazexaa Oromooti' jedhamas. Gaazexaan kun waggaa 44 dura ture kan hundeeffame.
...tti maxxanfame 7:38 21 Adooleessa 20207:38 21 Adooleessa 2020
Duula miidiyaalee hawaasummaa ergaa jibbaarraa bilisa gochuu
Duulli ergaa jibbiinsaa falmatu koree garagaraa hammachuun lammiilee Itoophiyaa biyyoota garagaraa jiraataniin eegalame
...tti maxxanfame 5:14 10 Adooleessa 20205:14 10 Adooleessa 2020
...tti maxxanfame 9:04 10 Caamsaa 20209:04 10 Caamsaa 2020
Wal dhabdeen FBC fi Damee isaa FM Maqalee gidduu jiru maali?
Gaazexeessitoonni Faanaa FM dame Maqalee jiran hoggantoota Finfinnee waajira FBC waajira ol-aanaa jiranirraa dhiibbaan akka isaanirra gahaa jiru BBCtti himan.
...tti maxxanfame 6:41 9 Caamsaa 20206:41 9 Caamsaa 2020
'Komiin sagaleen Obbo Lammaa OBN irraa uggurameera jedhu qulqulleessuu dandeenya'
Miseensi Boordii OBN akkasumas Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa haasaan Obbo Lammaa Magarsaa OBN irratti akka hin dabarre dhorkamuu quba hin qbau jedhan.
...tti maxxanfame 15:44 7 Caamsaa 202015:44 7 Caamsaa 2020
Mootummaa Naannoo Oromiyaan kan bulu 'Oromia Broadcasting Network' sagaleen Ministira Ittisaa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa akka qilleensarra hin baane dhorkuun gaazexeesitoota dhaabbatichaa biratti mufii uume.